Hentitra ny hafatry ny eveka: «Aoka tsy hafangaro ny adilahy politika sy ny tolona ara-pahasalamana» | NewsMada
Hentitra ny hafatry ny eveka: «Aoka tsy hafangaro ny adilahy politika sy ny tolona ara-pahasalamana»
Nampita hafatra ny eo anivon’ny Fivondronamben’ny eveka (Fem), ny alakamisy teo. Niantso firaisan-kina sy fifanomezan-tànana izy ireo. « Aoka mba hampandeferina ny hampom-po diso toerana ary tsy afangaro ny adilahy politika sy ny tolona ara-pahasalamana, iarahantsika miatrika. Matoky ny fahendrentsika mpiray tanindrazana izahay eveka », hoy ny hafatra. Anisan’ny nitodihan’izy ireo ny anjara toeran’ny fampitam-baovao sy serasera hampahalala ny vahoaka ny tokony ho fantatra sy hanentana amin’ny fitandremana tokony hatao. Niaiky ny Fem fa mahazo laka koa ny tambajotran-tserasera sosialy. « Miantso ny rehetra anefa mba hampiseho fahendrena ka tsy hampita vaovao tsy marina mampikorontana ny fiainam-bahoaka efa trotraky ny tahotra sy ny adim-piainana. Ilaina ny tsikera am-pitiavana hahatsara zavatra fa aoka kosa hatsahatra ny fankahalana mitarika fifandrangitana sy fifanaratsiana tsy hitera-bokatsoa », hoy ny hafatra.
Notsiahivin’izy ireo fa mifanindran-dalana amin’ny fiparitahan’ny coronavirus ny firongatry ny tazomoka sy ny dingue ary ireo aretina hafa mahazatra, amoizana ain’olona maro kokoa aza. Heverin’izy ireo fa fotoana izao hijerena ny fomba hanatsarana ny fahasalamam-bahoaka.
Mitaky mangarahara sy fahamarinana ny eveka
Miandrandra sori-dalana mazava avy amin’ny tompon’andraikitry ny fampianarana koa ny Fem mba hampisinda ny tebitebin’ny tanora sy ny ray aman-dreny, noho ny taom-pianarana tapaka an-tenantenany.
Etsy an-daniny, mitaky ny fahamarinana sy ny mangarahara amin’ny fitantanana ny fanampiana rehetra ka tsy hisy ny hahatsiaro tena ho hadino, indrindra ireo marefo sy ireo any amin’ny tany lavitra andriana. « Mampalahelo fa mbola misy ihany ny zatra lalan-dririnina ka mbola sahy manodinkodina ny fanampiana tokony hozaraina, amin’izao fotoan-tsarotra izao. Hita ho nirongatra koa ny asan-dahalo sy ny fandrobana. Aoka mba hanohina ny fontsika izao fotoan-tsarotra izao ka hibebahantsika sy hialantsika amin’ny ny fitiavan-tena mitondra amin’ny fanararaotana sy ny kolikoly », hoy ny hafatry ny Fem.
Nankasitraka ny ezaka ataon’ny mpitondra isan’ambaratongany ny eveka, mitady ny fomba rehetra hifehezana ny fiparitahan’ny valanaretina sy hiarovana ny mpiray tanindrazana.